ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်. ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင် ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအားအသု
Web Developer (ဆော့ဖ်ဝဲ)
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်. ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင် ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအားအသုံးပြုခြင်း ပြန်လည်ဝေငှခြင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သောဥပဒေရေးရာကိရိယာတစ်ခုပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများဖြင ..
Zapya သည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဖိုင်များမျှဝေသည့် အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစပိုင်းတွင် တရုတ်ဈေးကွက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံသွားသည်။ ၎င်းကို စက်လည်ပတ်မှုစနစ် များစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Wang Xiao Dong, Steve Gu, နှင့် Shanping တို့သည် Zapya ကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းဆော့ဖ်ဝဲသည် အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းမွန်မှု မရှိသော နိုင်ငံများရှိ အသုံးပြုသူများကို အင်တာနက် မပါဘဲ ဖိုင်များကို မျှဝေရန် နှင့် ကူးပြောင်းရန် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သည် Wi-Fi hotspot ဖန်တီးထားပြီး အခြားအသုံး ...
Web Developer သည် Mozilla web browser ကို အခြေခံထားသော extension တစ်ခုဖြစ်သည်။ Web Developer သည် ပြင်ဆင်မှုများကို ထပ်ထည့်နိုင်ခြင်း၊ အမှားမှားကိုရှာဖွေပြင်ဆင်ပေးခြင်း စသော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည့် tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Firefox,Flock, နှင့် Seamonkey စသည်တို့နှင့် အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ Chris Pederick က ဖန်တီးခဲ့သည်။ သူသည် User Agent Switcher extension ကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့သေးသည်။ Web Developer သည် Mozillas 2006 "Extend Firefox" ပြိုင်ပွဲတွင် grand prize winner ဆုကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Website ဖန်တီးမှုအတွက် Firefox developers များမှ အကြံပြုထောက်ခံသော ...
Fedora ဆိုတာက Red Hat ကုမ္ပဏီက ထောက်ပံ့ပေးပြီး Fedora Project လို့ခေါ်တဲ့ အွန်လိုင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က Linux kernel ပေါ်မှာ အခြေခံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ operating system တစ်ခုပါ။ Fedora ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လွတ်လပ်ပြီး အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ အဲဒီ အခမဲ့လွတ်လပ်ဆော့ဖ်ဝဲလောကမှာ ထိပ်တန်းက ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Linux kernel ကိုထွင်ခဲ့တဲ့ Linus Torvalds ကတော့ Fedora ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ PowerPC အမျိုးအစားတွေပေါ်မှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာ Fedora ကိုပဲ သုံးပါတယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဖူးပါတယ်။ အခုထိလည်း Linus T ...
4K Download ဆိုသည်မှာရုရှားနိုင်ငံ၊ နိလ်စနီနော်ကလပ်လ်အခြေစိုက်မီဒီယာ LLC မှတီထွင်ထားသော ပလက်ဖောင်း အစီအစဉ်များဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည် မက်၊ ဝင်းဒိုးစ်အတွက် နှင့် လင်းနပ်စ်အတွက် 4K Download သည်အသုံးပြုသူများအား ယူကျုဘ် ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် နှင့် ဝိမိအို ကဲ့သို့သောဗီဒီယို ဝဘ်ဆိုက်များမှဗီဒီယိုများနှင့်အသံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ အင်စတာဂရမ် မှဓာတ်ပုံအရံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်၊ ဆလိုက်ရှိုးများကိုဖန်တီးထုတ်ဝေရန်နှင့်ဗွီဒီယိုမှဒေါင်းလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ စီမံကိန်း၏အမည်သည် 4K ဗီဒီယိုအတိုအရှည်အမည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
Jython သည် Java platform ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Python programming language ဖြစ်သည်။ ဤအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုယခင် JPython ဟု ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိလူသိများခဲ့သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင် ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအားအသုံးပြုခြင်း ပြန်လည်ဝေငှခြင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သောဥပဒေရေးရာကိရိယာတစ်ခုပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေ စာချုပ်ပါဥပဒေအရဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးသည်မူရင်းကုဒ်နှင့်အရာဝတ္ထုကုဒ်နှစ်ခုလုံးတွင်မူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ထားသည်။ ထိုဆော့ဖ်ဝဲကိုအမေရိကန်အစိုးရမှတီထွင်သူ မဟုတ်လျှင်၎င်းတွင်မူပိုင်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအများဆိုင်သို့လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်လိုင်စင်ရသူအားပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဆော့ဖ်ဝဲမိတ္တူတစ်ခု တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုရန်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုသည်မူပိုင်ခွင့်အောက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲပိုင်ရှင်၏သီးသန့်ရပိုင်ခွင့်များကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဖြန့်ဝေထားသောဆော့ဖ်ဝဲအများစုကိုလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည် ဇယားကိုကြည့်ရူရန် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အသုံးများသောအမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လိုင်စင်ရသူအားအထူးအခွင့်အရေးများပေးသောလိုင်စင်များနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲများ FOSS တို့ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆကွာခြားချက်မှာဖောက်သည်တစ်ဦးထံမှရရှိသောဆော့ဝဲလ်ထုတ်ကုန်ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ဖ်FOSS ဆော့ဖ်ဝဲဖောက်သည်အားရပိုင်ခွင့်နှစ်မျိုးလုံးကိုလိုင်စင်ချထားသည်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခွင့်အရေးများကိုလိုင်စင်မပေးသောကြောင့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားသည်။